पत्रपत्रिकामा आजः चिनियाँ राष्ट्रपति सी आज आउँदै, लाज छोप्न कराेडौँ खर्च
जनतापाटी शनिवार, आश्विन २५, २०७६, ०७:०९:०० मा प्रकाशित
काठमाडौँ । राजधानीबाट आज प्रकाशित पत्रपत्रिकाले चिनियाँ राष्ट्रपति सी आज आउँदै, दुनियाँभर चीनको लगानी ५० खर्ब डलर, १०० औँ नोबेल शान्ति पुरस्कार इथियोपियाका प्रधानमन्त्रीलाई, लाज छोप्न करौडौँ खर्च, यात्रु कोचाकोचले दुर्घटना लगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् ।
आजको नयाँपत्रिका दैनिक लेख्छ, चीन विश्वकै सबैभन्दा ठुलो आधिकारीक श्रृणदाता बनेको छ । उसले सन् २०१८ सम्ममा विश्वका विभिन्न मुलुकमा ५० खर्ब अमेरिकी डलर श्रृण लगानी गरिसकेको छ । यो रकम विश्वकाृ कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ६ प्रतिशत हो । सन् २००० मा चीनको यस्तो लगानी ५ खर्ब डलर थियो, जुन विश्वकै जिडिपीको एकब प्रतिशत मात्रै हो । जर्मनीको किएल इन्स्टिच्युट अफ वल्र्ड इकोनोमी ले हादै सार्वजनिक गरेको अध्ययन अनुसार चीनको श्रृण तथा अनुदानको आकार १८ वर्षमा १० गुना बढेको छ । यो तथ्यांकअनुसार चीन अहिले विश्वको सबैभन्दा ठुलो आधिकारीक श्रृणदाता (अफिसियल क्रेडिटर) बनेको छ । तर, चीनसँगै सीमा जोडिएको नेपालमा भने हालसम्म चिनियाँ सरकारी अनुदान तथा श्रृणको मात्रा नगन्य मात्रै छ ।
नयाँपत्रिकामै १०० औँ नोबेल शान्ति पुरस्कार इथियोपियाका प्रधानमन्त्रीलाई विषयको समाचार छापिएको छ । यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार अफ्रिकी राष्ट्र इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबिया अहमदलाई प्रदान गरिने भएको छ । छिमेकी मुलुक इरिट्रियासँग वर्षौँदेखिको द्वन्द्व समाधान गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएबापत नोबेल कमिटीले उनलाई छानेको हो ।
इथियोपियाकै प्रान्तबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र देश बनेपछि इरिट्रिया र इथियोपियाबीच सीमा समस्या निम्तिएको थियो । सन् १९९८ देखि २००० सम्म चलेको सीमा युद्धपछि दुई देशबीच द्वन्द्व चर्कियो । सन् २०१८ अप्रिलमा सत्तामा आएपछि प्रधानमन्त्री अबियाले इरिट्रियासँग वार्ता गरी गत वर्ष शान्ति सम्झौता गरे । अबियाको पहलमा भएको यो सम्झौतासँगै २० वर्ष लामो सैनिक द्वन्द्व पनि अन्त्य भयो ।
नोबेल कमिटीका अनुसार ‘शान्ति प्राप्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य’ जुटाउन गरेको प्रयत्नका लागि अबियाले पुरस्कार पाउन लागेका हुन् । अबिया हाल ४३ वर्षका मात्र छन् ।
आजको नागरिक दैनिक लेख्छ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ शनिबार नेपाल आउँदै छन् । भारतको औपचारिक भ्रमण सकेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपालको राजकीय भ्रमणका लागि शनिबार अपराह्न ४ः३० देखि ५ः३० बजेबीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लनेछन् । उनको स्वागतका लागि राष्ट्रपति भण्डारी विमानस्थल जाने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि सीको स्वागतका लागि विमानस्थल जाने सम्भावना छ ।
चिनियाँ राष्ट्रप्रमुखको नेपाल भ्रमण २३ वर्षपछि हुन लागेको हो । सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।
नागरिक दैनिकले लाज छोप्न करौडौँ खर्च विषयलाई लिएर प्राथकिताका साथ छापेको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको शनिबारदेखि हुने दुईदिने राजकिय भ्रमणलाई लक्षित गरी राजधानी काठमाडौँलाई सजाएर चिटिक्क पारिएको छ । राष्ट्रपति सी सवार हुने सडकसहित छेउछाउका संरचना रंगाइएको छ । भत्किएका र जीर्ण संरचना र फोहर थुप्रिएका ठाउँ रंगिन ब्यानरले छोपिएको छ । अस्तव्यस्त तीनकुने पार्कको बाहिर फुल र बिरुवा रोपिएको छ । विमानस्थल-तीनकुने-बानेश्वर-माइतिघर हुँदै लाजिम्पाटसम्म सडक कालोपत्रे र सजावट गरिएको छ । सडक आसपास निमाणधिन संरचनालाई विभिन्न आकृतिका रंगिन ब्यानरले ढाकिएको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, ३४ सिटको बसमा तेब्बर भन्दा बढी यात्रुको कोचाकोचले दुर्घटना भएको हो । क्षमता भन्दा बढी यात्रु लिएर सिन्धुपाल्चोकको भोटसिपाबाट काठमाडौँ गइरहेको बस शुक्रबार इन्द्रावती गाउँपालिकाको तिर्खुमोडमा सडकबाट खस्दा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । सय जना घद्दाइते छन् । हेलम्बु यातायातको बा२ख २७१५ नम्बरको बस कच्ची सडकबाट डेढ सय मिटर तल खसेको थियो । मोडबाट पल्टेको बस तल्लो सडकमा बजारिँदै झरेको थियो । दशैँ मनाएर फर्केका यात्रु लिएर बिहान ८ बजे भोटसिपा गाउँबाट हिँडेको बस ९ बजेर ५५ मिनेटमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो ।
लकडाउनका बेला सहकारीको पैसा बैंकमा, सहकारीमा तरलता अभाव सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले कोरोनका कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आएको खण्डमा सहकारीमा पनि समस्या देखिने बताएका छन् । मंगलवार, बैशाख ९, २०७७, ०८:३७:००
निर्मलाका लागि न्याय माग्दै प्रधानमन्त्री निवास अगाडि प्रदर्शन घटनाको ५ महिना वितिसक्दा पनि सरकारले दोषी पक्राउ गर्न सकेको छैन । शनिवार, पुष १४, २०७५, १४:४४:००
चौधरीको महाभूलः किन आत्मघाती गोल ? बुधवार, श्रावण २३, २०७५, ०९:३०:००